Umahluko ezikhanyisayo esikweletu isitolimende izinkokhelo
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Umahluko ezikhanyisayo esikweletu isitolimende izinkokhelo
Umehluko wesikweletu ophendukayo futhi isitolimende ingatholakala imigomo kanjani ukucacisa izinkokhelo zenyanga. Ezikhanyisayo Ikhredithi indlela ukuthi uzokhokha ukusetha inani njalo ukukhokha inyanga ngayinye ngesikhathi inkontileka ikhadi, kodwa izitolimende indlela ukuthi uzokhokha isikhathi ngasinye setha ngamunye ngesikhathi sokuthenga.
ezikhanyisayo esikweletu ezikhanyisayo credit, bese usetha inkokhelo yanyanga zonke ngesikhathi ngokuyisisekelo inkontileka ikhadi. Chitha 20 lapho ngaphakathi yen ubuncane nokukhokhwa nyangazonke 5,000 yen, izilungiselelo, ezifana 10,000 yen uma lemali ukusetshenziswa ilingana noma angaphezu kwezigidi ezingu-20 yen kuvamile. Kulokhu, it asishintshi 5000 yen esiphansi senkokhelo inyanga ngayinye by lemali ukusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, uma inkokhelo encane noma inkampani ikhadi ngaphezulu isinqunyiwe, ungasetha inani lemali bebodwa.
e-credit ezijikelezayo, ngaphambi inkokhelo kuzo zonke yezitolo noma kungenziwa isethwe ezikhanyisayo credit, futhi noma ungasetha ukuze udumo ezikhanyisayo ngocingo noma ikhaya ikhasi inkampani ikhadi ngemva yezitolo. Ngaphezu kwalokho, ungase futhi ucacise indlela yokukhokha udumo ezikhanyisayo ngesikhathi sokuthenga esitolo. Kukhona ikhadi ribonucleic ozinikele, ngeke bonke ukusetshenziswa leli khadi ngokuzenzakalelayo ezikhanyisayo credit.
izitolimende kanye uhlelo ukuthi uzokhokha ihlukaniswe ngenani umsebenzisi oyifunayo. Ukukhokhwa Iyahluka kuya nyangazonke ngokusebenzisa isamba kanye nenani izinkokhelo umehluko omkhulu phakathi credit ezikhanyisayo. Inombolo izinkokhelo, setha ngamunye ukusetshenziswa ikhadi ngalinye. izikhathi 3 noma izikhathi 5, izikhathi 10, kuvamile, izikhathi ezifana 12. Kungaba elalakhelwe mayelana 24 izikhathi noma ngezikhathi 36, noma ungakhetha wenkokhelo.
Ngokuvamile ngalinye izinzuzo, credit ezikhanyisayo isethelwe isithakazelo kuka ithuthukisa izitolimende. Ezimweni eziningi, nge 18% interest kusuka ku-15% ngo-credit ezijikelezayo, in izitolimende kube-15% kusukela ngo-12%. Ngo-credit ezijikelezayo has izinkokhelo zenyanga njalo, ngoba imali ukukhokhela kungakhathaliseki ukuthi singakanani shopping, abendlu e iphuzu ezifana Lithi friendly indlela yokukhokha. Njalo
ukuhlanekezela in izitolimende ukuthenga izimpahla, ukuthi izinkokhelo lemali luzoqhubeka lukhula. Lapho udumo ezikhanyisayo siyaqhubeka yezitolo, kodwa kukhona kuphetha ka kungenzeka yalahleka noma bab? kunjalo, izitolimende, ngakolunye uhlangothi, ngoba inombolo isethiwe, kukhona inzuzo ukuthi kwaqedwa ukukhokhelwa okulula ukuyiqonda. Ngakho-ke, ezikhanyisayo credit noma abampofu ukuphathwa kwezimali, abantu abangekho noma ungathanda ukuba cindezela ngangokunokwenzeka umthwalo ekukhokhweni nyangazonke iye nazo.
Ngaphezu kwalokho, izitolimende ngisho njengoba uzama ukushintsha indlela yokukhokha kusuka okulandelayo, kunzima ukushintsha nje akukho izimo ezikhethekile, ezikhanyisayo credit kungenzeka kusengaphambili. Lokhu kuyinzuzo enkulu ezikhanyisayo credit. Ngokwesibonelo, uma uthenga yen izimpahla 100,000, shiya sikhathi ezikhanyisayo credit, uma imali ihlelwe ezifana wenyanga elandelayo ingalungiswa, ungakwazi ziqedwe ngesikhathi esisodwa yokukhokha imali.
ukuthi inani, ungakwazi ukusika ukukhokha inzalo. Inkokhelo esimweni izitolimende akuyona into engenakwenzeka kodwa, ngemva kokuba yokuxhumana yefoni ngqo, njll ukuba inkampani ikhadi, kukhona kungenzeka sikukhokhise i zokuqondisa kwezinhloso zenzuzo, ezifana ekuseni asule isithakazelo ngokwehlukile. Ezikhanyisayo Ikhredithi ukuqonda kahle ukuthi isebenza kanjani, ungasebenzisa ezifana kulula kakhulu ukuya ikhokhwe kahle ngenkathi usebenzisa kusengaphambili. Ngokwesibonelo, uma uthenga yen izimpahla 100,000, shiya sikhathi ezikhanyisayo credit, uma imali ihlelwe ezifana wenyanga elandelayo ingalungiswa, ungakwazi ziqedwe ngesikhathi esisodwa yokukhokha imali.
ukuthi inani, ungakwazi ukusika ukukhokha inzalo. Inkokhelo esimweni izitolimende akuyona into engenakwenzeka kodwa, ngemva kokuba yokuxhumana yefoni ngqo, njll ukuba inkampani ikhadi, kukhona kungenzeka sikukhokhise i zokuqondisa kwezinhloso zenzuzo, ezifana ekuseni asule isithakazelo ngokwehlukile. Ezikhanyisayo Ikhredithi ukuqonda kahle ukuthi isebenza kanjani, ungasebenzisa ezifana kulula kakhulu ukuya ikhokhwe kahle ngenkathi usebenzisa kusengaphambili.